Siyaasiyiinta maamulka Somaliland oo weli heshiis gaari weysan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Siyaasiyiinta maamulka Somaliland oo weli heshiis gaari weysan
27th May 2015 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Wadahadal maalmihii lasoo dhaafay u socday axsaabta siyaasadda Somaliland ayaa guul darro ku dhamaaday, iyadoo heshiis laga gaari waayey muran ka taagan muddo kordhin ku dhow 2 sano oo dhawaan Golaha Guurtidu u sameeyeen xukuumadda madaxweyne Siilaanyo.
Mid ka mid ah labada xisbi ee mucaaridka oo ah WADANI ayaa isaga soo baxay shirkii socday, isla markaana sheegay in wada hadalkaasi burburay, wuxuuna bulshadda Somaliland iyo beesha caalamka ugu baaqay iney arrinta soo farageliyaan si xal siyaasadeed loo gaaro.
Guddoomiyahja xisbiga Wadani, C/raxmaan Cirro ayaa warbaahinta u sheegay “Wadahadalkaasi wuu burburay, waxaana bulshadda Somaliland iyo beesha caalamka soo dhoweynaynaa cid kasta wax ka qaban karta inay soo gasho”.
Xisbiga talada haya ee KULMIYE iyo xisbiga kale ee mucaaridka ah ee UCID ee Feysal Cali Waraabe hogaamiyo ayaa iyagu sheegay in wadahadalkaasi uusan weli burburin, balse xukuumadda iyo xisbigeedu dalbateen in wakhti la siiyo.
“Wadahadalkaasi ma burburin, laakiin xukuumadda iyo xisbiga Kulmiye ayaa codsaday in wakhti gaaban oo 24 saac ugu yaraan ugu badnaana 48 saacadood la siiyo si waxaasi loogu heshiiyey u iclaamiyaan” ayuu yidhi musharaxa gudoomiye ku xigeenka xisbiga UCID C/rashiid Xasan Mataan.
“Wax wadahadal ah oo burburay ma jiro ee xisbiga WADDANI ayaa isaga baxay, aqlabi-yaddii Xisbiyadu way joogaan oo UCID iyo KULMIYEba way Fadhiyeen, Waxaana isla waafaqnay in wakhti gaaban nala siiyo si aanu arrinta u soo bisleyno,” ayuu yiri gudoomiye ku xigeenka xisbiga KULMIYE, Kaahin.
Dhanka kale, fguddoomiyaha golaha guurtida Somaliland, Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa markii u horraysay ka hadlay go’aanka ay muddada ugu kordhiyeen xukuumadda ee muranka siyaasadeed dhaliyay.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in uu yahay go’aan gole oo sharci ah. Hadalka guddoomiyaha ayaa yimid ka dib markii uu kulan la yeeshay safiirka dawladda Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya Neil Wigan oo safar ku jooga Hargeysa.
Milateriga Soomaaliya oo soo bandhigay dhallinyaro hubeysan oo eedo loo heysto
Maxey ka wada hadleen RW Cumar iyo Axmed Madoobe? (War-murtiyeed)